मेरो शरीर भद्दा भयो त के भयो ? : रेखा थापा - Mountain Media
मेरो शरीर भद्दा भयो त के भयो ? : रेखा थापा
हिरोइनहरु रुपमा पी’डित छन् भन्ने गौरीले पनि सुनेकी हुन्। कोही पी’डि’त छन् भने त्यसलाई नसहन उनी सुझाउँछिन्। ‘आफ्नो इच्छा पूरा गर्न ग’लत बाटो हिँडियो भने त्यसमै पछु’तो भएर त’ना’व ज’न्मिन्छ। साधारण जीवन र सही मा’र्गले स’न्तु’ष्टि दिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पुरानाले गरेको गल्ती नयाँले दो’हो’र्यासउनु हुँदैन। आफूअनुकूल वातावरण आफैंले सिर्जना गर्ने हो।’